अब मुलुक बनाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ
मुख्य पृष्ठराजनीति विचार विश्लेषणअब मुलुक बनाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ
म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएको हुनाले वर्तमान अवस्थामा नेपाललाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हालको नेपालको राजनीतिमा भएका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सबै राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भइ आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्त्व गरेको पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई इमानदारीका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ ।
अब उहाँहरूले मुलुक निर्माण, आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्त्व नयाँ पुस्ताहरूमध्ये ज–जसले त्यस कुराको नेतृत्त्व गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । मलाई लाग्दछ, सबै कुराको नेतृत्त्व एउटै पुस्ताले गर्न सम्भव छैन । विकास र समृद्धिका लागि त्यहीअनुसारको स्कुलिङ हुनुपर्छ । अरुलाई गाली गरेर होइन विसंगतिलाई हटाएर मुलुक निर्माणको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । साना–साना कामबाट ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।
नेपाल नबन्नुको कारण राम्रो संस्कारको कमी हो । यहाँ विकासप्रति कोही पनि मोहित छैन, सबै स–साना स्वार्थमा अल्झिएका छन् । हाम्रो देशमा नेतृत्त्वकर्ताहरूले सही नीति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । किनकी, हामीसँग नीतिगत अनुसन्धानको संस्थागत संरचना छैन । हाम्रो सरकारी संरचनाको क्षमता कमजोर छ । देश भित्रका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोर क्षमता हो । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र पनि इमान्दार हुन सकेन । राजनीति इमान्दार हुन सकेन । निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, आयोजना सक्ने कुरामा, जग्गामा झमेला, ऐन, नियम कानुनमा समस्याहरू छन् । यस्ता ऐन नियम कानुन छन्, जसले विकासलाई बाँध्छ । त्यसलाई फुकाउन पहल भएन ।
सबैभन्दा पहिलो, नेपालको भूराजनीति अवस्था छ । भारत र चीनका बीचमा हामी अवस्थित छौं । हामीले आफ्नो विकासका लागि जुन रणनीति अपनाउनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेनौं । सामान्य रूपमा नेपालमा विकास भनेको के हो ? कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्ने ? भन्न त हामीले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन भनिरह्यौं । तर, त्यसका लागि सही योजना बनाएनौं । नत्र ८३ हजार मेगावाट क्षमता भन्यौं तर, १२ सय मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं ।
विनाशकारी भूकम्पपछिको नवनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको कुनै भेउसमेत छैन । ढुकुटीमा पैसा छ, जनतामा विकास–निर्माणको आकांक्षा चुलिएको छ, तर सरकार विकासका लागि खर्च गर्न सक्दैन । त्यसैले अब शिक्षाको हरेक तहमा अहिले भइरहेको राजनीतीकरण र भागबण्डाको अन्त्य नभएसम्म सुधार हँुदैन । शिक्षकहरूको सही व्यवस्थापन अर्को चनौतीपूर्ण काम हो, जसको साँचो रानीतिक दलहरूले बोकेका छन् । त्यसैले, राजनीतिक दलहरूमा चेतनाको विकास नहुन्जेल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन । शिक्षालाई राजनीतिक दलहरूको पेवा हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।
त्यसैले अब मुलुक बनाउन हरेक ठाउँ र क्षेत्रबाट सबैले हातमा हात मिलाउँदै प्रचारमुखीभन्दा परिवर्तनमुखी भएर काम गर्नु पर्छ । त्यसैले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई होइन, अब मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रिय सम्पत्ति सूचकांकलगायतका अन्य सूचकका आधारमा हाम्रो विकास मापन हेर्ने बेला भइसकेको छ । अबको राजनीति पार्टी र व्यक्तिका लागि होइन । आरोप प्रत्यारोपका लागि होइन । अबको राजनीति सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
हामीले उद्यमशिलताको विकास गरेनौं । जुन लक्ष्य लिने हो, त्यसतर्फ जान सकेनौं । भित्री, बाहिरी स्वार्थबाट अल्झिएका छौं । नेपालको राजनीतिमा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै हेर्न हो भने राजदूत कसका र कस्ता मान्छे हुन्छन् ? सचिवको नियुक्ति र सरुवा केका आधारमा गरिन्छ ? योजना आयोगमा को पुग्छ ? विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्तिमा को पर्छन् ? सरकारका यस्ता निर्णयमा क्षमता र दक्षताभन्दा दलीय भागबन्डा हावी भएको जगजाहेरै छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै चालु पूर्वाधार आयोजनामा ‘भेरिएसन अर्डर’ गरेर अर्बौं कमाउने ‘प्राविधिक’ दक्षता पनि सबैलाई थाहै छ ।
तर, आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, लगानी कसरी आउँछ, उत्पादकत्त्व र रोजगारी कसरी बढ्छ भन्ने कुराको चासो र दक्षता कसैमा पनि देखिएन । जतिबेलासम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म संविधान निर्माण एउटा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । मुलुकले खोजेको परिवर्तन पाउन सक्दैन । सरकार परिवर्तन भइरहने, विकासमा केन्द्रित नहुने समस्या छ । राजनीति के का लागि ? अबको राजनीति त विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आर.सी. अधिकारी, ओखलढुंगा कुईभिर (हाल इटहरी, सुनसरी)